Nwere ike a Guy Mee a WordPress Okwu ma ọ bụ Gịnị?! | Martech Zone
Enyi m na-ede blọgụ, Sean, ji ya arụ ọrụ ọhụụ - Geek na laptọọpụ. Nwoke a na - ewunye otu akpụkpọ anụ WordPress WordPress WOW!
Oh ee, na ọdịnaya ahụ adịghịkwa njọ, ma. 😉
Daalụ maka ịkpọtụrụ!
Obi dị m ụtọ na ị kwadoro ọdịdị ọhụrụ ahụ. Achọrọ m idebe ihe a n'oge a.
Enwere m ụfọdụ ụdị CSS dị ntakịrị iji banye ebe maka ọdịnaya dị iche iche mana ọ na-abịakọta ọnụ nke ọma.
Isi ihe kpatara mgbanwe ahụ, echere m na ebe ọ bụ na ị mere ngbanwe n'oge na-adịbeghị anya, m kwesịrị ịmịkwa ya ọkwa… hehe 🙂
Chei, nke ahụ dị mma. Dị egwu dị ka m na-egwu ala n'ime ụwa WordPress gburugburu izu ụka a!
Ihe ngosi dị egwu.
Echere m na isiokwu wordpress (nke kachasị mma) ga-eme oke ihu na wiki Web Development m bidogoro maka ndị ọrụ weebụ.
Ọ bụghị ihe ọjọọ ma ọlị! Ọ na-eme ka m bụrụ ihe nzuzu. Nwa m nwere ọrụ ụfọdụ m ga-arụ!
Ekele dịrị onye ọ bụla maka okwu ọma gị na nhazi ọhụụ m.
@Thor: Adị m njikere iji nyere aka ma ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụ ịchọrọ nrụpụta WordPress ọhụrụ 🙂